ठूलो भूकम्प गएको झन्डै ३ वर्ष बितिसक्दा पनि पराकम्प अझै रोकिएन, के अझै ठूलो भूकम्प जान्छ ? « Naya Bato
ठूलो भूकम्प गएको झन्डै ३ वर्ष बितिसक्दा पनि पराकम्प अझै रोकिएन, के अझै ठूलो भूकम्प जान्छ ?
चैत १७, काठमाडौँ । मुलुकमा ठूलो भूकम्प गएको झण्डै तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भूकम्पका पराकम्प जाने क्रम अझै रोकिएको छैन ।
२०७२ वैशाख १२ भन्दा अगाडि जाने भूकम्पको पराकम्पको तुलनामा अहिले पाँच गुणा वृद्धि भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ । यो खबर हामीले गोरखापत्रबाट लिएका हौ ।
“गोरखादेखि पश्चिम र भारतको देहरादूनदेखि पूर्वमा भूकम्प नगएको करिब पाँच सय वर्ष भइसकेको छ, यो क्षेत्रमा ठूलै भूकम्प जाने शक्ति सञ्चित छ” केन्द्रका प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना छ तर कहिले जानेछ त्यो भन्न सकिँदैन । ” उहाँले भन्नुभयो, “पश्चिम नेपालमा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावनाको अनुमान कुनै नयाँ अनुमान होइन, यो बीस वर्षदेखिको अनु्मान हो ।
पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ मा ८ दशमलव ५ रेक्टर स्केलको र त्यसपछि विक्रम सम्बत् २०३७ सालमा बझाङ केन्दबिन्दु भएर ६ दशमलव ३ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । हिमाली क्षेत्रमा भूकम्प जाने सम्भावना सधैँ रहिरन्छ भन्ने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।